Isitaki se-LAMP ku-Windows Subsystem ye-Linux > UVielhuber David
Isitaki se-LAMP ku-Windows Subsystem ye-Linux11
Lapho ngifuna elilungile ukuthuthukiswa imvelo, i-Windows 10 izipesheli izixazululo okuphelele ezifana XAMPP , WAMP futhi MAMP , ukufakwa bomdabu ngesandla, futhi wekhasi izixazululo ezifana abangondingasithebeni ( Scotch Ibhokisi ) kanye Docker ( Devilbox , Laradock ). Kepha ngenxa yezidingo zami njengokulungiswa kwamahhala, izitifiketi zangempela ze-SSL zekhadi lasendle, ukufinyelela kuwo wonke amadivayisi wokugcina kunethiwekhi yendawo kanye nokuzinza okuphezulu nokusebenza, zonke izixazululo zehlulekile - ngaphandle kwesisodwa.
Ngizamile konke ukwahluka (ikakhulukazi iDocker) ezinyangeni ezimbalwa ezedlule futhi ngabambeka kuLando . Kepha kwavela ukuthi zonke izixazululo ezenzelwe i-Docker (ne-Vagrant) zezizathu zokusebenza ngaphansi kweWindows ne-Mac azisizi ngalutho kumaphrojekthi anenombolo ephezulu yamafayela ( ukubuka ikhasi kuthathe cishe imizuzwana engama-25). Kunemicu eminingi lapha nalapha nalapha lapho kuxoxwa khona ngezimbangela nezisombululo ezingaba khona .
Kimi bekunamaphilisi amaningi kakhulu ukuwagwinya - amafayela akufanele avumelaniswe ngesandla, kepha mane utholakale. Bengingafuni nokubuyela ku-MAMP PRO ebengikade ngiyisebenzisa iminyaka (ikakhulukazi ukwethuka ngaphansi kweWindows). Ngakho-ke ngabuyela ekuqaleni futhi ngazama futhi ngokuzalwa. Ngaphansi kweWindows lokhu bekuwumsebenzi odinayo ngendlela ejwayelekile noma ngeCygwin , ngize ngazama iWSL .
Bengivele ngibe nokuhlangenwe nakho okuhle kakhulu ngeWindows Subsystem yeLinux ezinyangeni ezedlule futhi ngemuva kokuthi zonke izinsizakalo ze-LAMP zisebenze ngemuva kwesivivinyo esifushane ngaphandle kwemikhawulo maqondana nokuzinza nokusebenza, ngifinyelele esiphethweni sokuthi iMicrosoft izuze izinto ezinhle lapha. Lokhu kulandelwa ukusethwa kwami ​​(okukhula njalo) kufaka phakathi yonke imibhalo yendawo yami yamanje yokuthuthuka ngaphansi kweWindows 10 Pro: